Zefania (mpaminany) - Wikipedia
I Zefania na Sôfônia dia mpaminany hebreo voaresaka ao amin' ny Baiboly. Naminany tamin’ ny nanjakan' i Jôsia tao amin' ny Fanjakan' i Jodà (640-609 tal. J.K.) izy, tamin' ny andron' ny mpaminany Jeremia. Nanohitra ny fanaon' ny firenena vahiny sy ny fivavahana amin’ ny andriamani-tsy izy ny mpaminany sady nanakiana ny fomba ratsin' ny mpitondra. Nitoriteny tao Jerosalema izy tamin’ ny taona 640-630 tal. J.K., taloha kelin’ ny fotoana niasan’ i Jeremia.
Tamin' ny fotoana nanjakan' i Amôna sy Manase tao amin' ny Fanjakan' i Jodà, ny fivavahana amin' ireo andriamanitra vahiny, toa an' i Baala sy i Astarte, dia nandroso tao Jerosalema, izay nampiditra fanao vahiny. I Jôsia, ilay mpanjaka nanitsy ny fivavahana, dia nikasa hampijanona izany fanao ratsy izany. Isan' ny nafana fo tamin' ireo mpanolo-tsaina ny amin' ity fanavaozana ity i Zefania.
Nanohitra ny fivavahana sy ny fitondran-tena ratsy ny mpaminany Zefania. Ka raha hitany ny fanompoan-tsampy izay efa tafiditra hatrao amin' ny toerana masina, dia nampitandrina izy fa handrava ny sisa amin' i Baala sy ny anaran' ny mpisorona amin' izany toerana izany Andriamanitra. Nitaky ny hiverenan' ny vahoaka amin' ny fahatsoram-piainan' ireo razany fa tsy ny aingitraingitry ny fitafiana vahiny izay nitafian' ireo ambony saranga ny mpaminany.
Ny mpaminany Zefania no atao hoe nanoratra ny Bokin' i Zefania.
Atao hoe צְפַנְיָה / Tsefanyāh , izay midika hoe "Nafenina i Yah" na "Nafenin'i Yah", i Zefania amin' ny teny hebreo. ka ny hoe Yāh dia fanafohezana ny hoe Yahweh.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zefania_(mpaminany)&oldid=1042144"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 15:06
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 15:06 ity pejy ity.